केही व्यक्तिकाे ‘धन्दा’ नै स्टिङ अपरेसन ! - Sankalpa Khabar
केही व्यक्तिकाे ‘धन्दा’ नै स्टिङ अपरेसन !
६ बैशाख ०६:५०
आजको पत्रपत्रिकामा कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणबारे मुख्यखबर छ । भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पद खारेजी र पुनः नियुक्ति र सपथबारे सबै पत्रिकामा खबर छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले संक्रमण तिव्र शिर्षकमा देशभरको कोरोना संक्रमणको आँकडा ग्राफमा देखाएको छ । संक्रमित मध्ये १० प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् भने दाङका अस्पतालमा बेड नै नभएको समाचारमा उल्लेख छ ।
एउटै व्यक्तिबाट १३ वटा स्टिङ अपरेसन शिर्षकमा अर्को समाचार छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेसनलाई केही व्यक्तिले ‘धन्दा’ बनाउन थालेको पाइएको छ। अदालतमा पुगेको कागजातका आधारमा एउटै व्यक्तिले १३ वटासम्म स्टिङ अपरेसन गराएका छन्। तिनले कृत्रिम सेवाग्राहीका रूपमा अख्तियारमा उजुरी दिई त्यहींबाट ल्याएको पैसा खुवाएर फन्दामा पार्ने गरेको देखिएको छ। ललितपुर गोदावरीका राजकुमार तिमल्सिनाले १३ स्ट्रिङ अपरेसन गराएका हुन्।
त्यस्तै नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेको खबरलाई पनि अन्नपूर्णपोस्ट्ले पहिलो पेजमा छापेको छ । नेपाल समूहका नेता बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डेसहितको टोली आइतबार दिउँसो आयोगमा पुगेर विवाद निरुपण गराउन भन्दै एक पत्र बुझाएको थियो।
नागरिक दैनिकले सहज छैन विप्लव कार्यकर्ताको रिहाइ शिर्षकमा मुख्य खबर छ । सरकारकासँगको सम्झौतापछि विप्लव कार्यकर्ता छुटाउने भनिएपनि गम्भीर मुद्धा लागेकाहरुलाई सरकारले छोड्न मानेको छैन । विप्लव समूहका कतिपय कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। तिनलाई छाड्न त्यति सहज छैन। राजनीतिक सम्झौताका आडमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई छाड्नु गैरन्यायिक देखिन्छ।
त्यस्तै नेपालको कोरोना भाइरसको दर बढ्नुमा छिमेकि देश भारतबाट फर्किएकाहरु मुख्य कारण रहेको अर्को समाचार छ । सीमाका जिल्लाहरुमा कोरोना संक्रमणको दर तिव्र छ ।
नेपाल समाचारपत्रले १३ सांसदको पदपूर्ति उपनिर्वाचनबाट गराउनु पर्ने मुख्य खबर छापेको छ । खासगरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेर पद खारेज भएका संघीय र प्रदेश सांसदको १३ स्थानमा उवनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।
चट्याङ लागेर नै बर्षिय बालकको मृत्यु
१७ बैशाख १४:१५